युगसम्बाद साप्ताहिक - अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक
अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक
Wednesday, 06.05.2013, 02:48pm (GMT+5.5)
० मुलुकको राजनीति जुन ढंगले अगाडि बढिराखेको छ यसलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ?
नेपालमा धेरै लामो समयदेखि विदेशी शक्तिहरूको जुन ‘गेम प्लान’ थियो त्यो एकदमै उत्कर्षमा पुगेको छ । अहिले विभिन्न खालका विदेशी शक्तिहरू, जसको सिधा स्वार्थ नेपालसंग जोडिएको छ, उनीहरूका बीचमा चरम प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यो चरम प्रतिस्पर्धा दलहरूबीचको विमति वा असहमतिको रुपमा प्रकट भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा दलहरूबीचको राजनीतिक विमति देखिन्छ तर यहाँ दलहरूबीचको राजनीतिक विमति होइन र कुनै सहमतिको कुरा पनि छैन । बाहिरी शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको छायाँका रुपमा मात्र दलहरूबीचको सहमति विमति प्रकट भएको हो । त्यस कारण यो प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुने वा मिल्ने अपेक्षा हामीले गर्नु हुँदैन ।
० वैदेशिक हस्तक्षेपको चर्चा सबैले गर्छन् र एकले अर्कोलाई विदेशीको दलाली गरेको आरोप लगाउने पनि गर्छन् तर त्यस्तो कुनै शक्ति त होला नि जसले विदेशीलाई चलखेल गर्ने मौका दिइराखेको छ ?
हैन, त्यस्ता शक्तिको अभावमा वैदेशिक चलखेल हुने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन । सामान्यतया हामीले के बुझ्न्पर्छ भने वैदेशिक चलखेललाई बढाउने, त्यस्ता खालका निर्णयहरू गर्ने र पटकपटक सहमतिहरू गर्ने जो आफूलाई मुख्य दल भन्छन् उनीहरू यसको जिम्मेवार हुन् तर यहाँनिर उनीहरूबीचको के भिन्नता हेर्नुपर्छ भने एकीकृत माओवादी र मधेशी गुटहरू स्पष्टतः नेपालको भूराजनीतिलाई उपयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत संगठित गरिएको शक्ति हो । नेपालमा अहिले जे भैरहेको छ त्यसको मुख्य स्रोत भनेको यी दुईटा शक्ति नै हुन् । यसो भन्नुको अर्थ कांग्रेस–एमालेलाई दोषमुक्त राख्न खोजेको होइन । तर उनीहरूको समस्या चाहिं त्यहाँभित्र रहेका केही व्यक्तिको समस्या मात्र हो । पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा उनीहरूमा समस्या छ ।
एमाओवादी र मधेशी गुटहरू संस्थागत रुपमै यो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने र जटिलता पैदा गर्ने काम गरिरहेका छन् । कहिले युद्धको नाममा, कहिले जातिको नाममा, कहिले क्षेत्रको नाममा अथवा कहिले दलीय सहमति र सहमतिको विरोधीको नाममा जुन खेल यहाँ निरन्तर चल्दैआएको छ यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने यी दुई शक्ति नै यहाँ विदेशीको सारा रणनीतिलाई भित्र्याउने र त्यसलाई मजबुत गर्ने स्रोत हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
० तपाई जनयुद्धताका माओवादीमै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले युद्धकै नाममा वैदेशिक शक्ति भित्र्याउने रणनीति थियो भन्दै हुनुहुन्छ । यसलाई अरु प्रष्ट पारिदिनुस न ?
निश्चित रुपमा हामीले त्यसबेला बुझेनौं । म आफैं पनि सामेल भएको थिएँ, त्यो अलग पाटो थियो । मेरो अहिलेको निष्कर्ष के हो भने नेपालमा अहिलेको अवस्थाभन्दा खतरनाक अवस्थता सिर्जना हुँदैछ र यो अवस्थामा पुर्याउनकै निम्ति माओवादी जनयुद्ध गरिएको थियो । त्यो नेपालको क्रान्ति वा यहाँका मान्छेहरूको दिमागबाट उत्पत्ति भएको होइन । नेपाललाई ध्वंश गरेर यसलाई असफल राज्यको रुपमा परिणत गरिकन विदेशी शक्तिले औपचारिक रुपमा अड्डा स्थापित गर्ने योजना अन्तर्गत नै त्यो युद्ध गरिएको थियो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
० मुलुकमा अझै खतरनाक अवस्था आउँदैछ भन्नुभयो त्यो भनेको के हो ?
धेरै पर जानै पर्दैन । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्दै दलहरूबीचमा जुन विग्रहको स्थिति विकसित भएको छ– यसले स्वाभाविक रुपमा मुलुकलाई द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेलेको छ । यो एउटा पाटो भयो र यसको आवरणमा विदेशीहरू विशेष गरी भारतीयले खेले । कसरी खेले भने– २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता ऐन पारित गरियो र अहिले त्यसबेला एकपटकका लागि मात्र भनि दिएको मुद्दा अहिले फेरि पल्टाएर तिनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर काम गरियो । यसले हाम्रो देशलाई यिनीहरूले उत्तरपूर्व श्रीलंकाको अवस्थामा पुर्याइसके । त्यसकारण नेपालमा भोलि जनसंख्या अतिक्रमण गरेर विभिन्न वहानामा युद्ध थोपर्ने खेल पनि उत्कर्षमा पुग्यो ।
अर्कोतिर नेपालभित्रै जातीयताको नाममा समुदायबीच भीडन्त गराउने योजना पनि चलिरहेको छ । हिजो जनयुद्धको विशेषता भनेको वर्गको रगत प्रयोग गरियो, वर्गको नाममा उपयोग गरियो तर अहिले वर्गको नाम उपयोग हुने स्थिति रहेन । त्यसकारण उनीहरूले अब जाति, भाषा र क्षेत्रको नाममा जनताको रगत प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालीहरूलाई यसरी गलत र प्रायोजित मुद्दाहरूमा फसाउने, एउटा ठूलो युद्धको अवस्था उत्पन्न गर्ने र यहाँ प्रवेश गर्ने जुन रणनीति हो त्यसको निष्कर्ष नै अहिलेको घटना हो त्यस बाहेक केही पनि होइन ।
० तपाई कसरी त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ ? मुलुकमा अब रक्तपात हुनुपर्ने मुद्दा के छ र ?
हैन, रक्तपात नभैकन विदेशी पस्नै सक्दैनन् । त्यसकारण उनीहरूको तर्फबाट भएको प्रयास हो । मलाई के लाग्दैछ भने हामीले धेरै ढिलो कुरा बुझ्दैछौं अथवा धेरै मान्छेहरूले बुझिरहेका छैनन् । दलको नाममा जो चाहिं अपराध गर्दैआएका छन् उनीहरूप्रति विश्वास गर्ने पनि एउटा तप्का छ । त्यसकारण अब हामीले कुरा बुझेनौ भने सानो वा ठूलो रुपमा हामीले त्यो नियति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । देश विस्तारै विस्तारै अफगानिस्तानको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ कस्तो देखिन्छ भने एउटा बहुआयामिक खालको साम्प्रदायिक दंगा पनि हुने, श्रीलंकाको जस्तो मधेशीको नाममा स्वतन्त्र तराईको लडाइँ सुरु हुने, भुटानको मोडेलमा देशको सारा प्राकृतिक स्रोत साधन विदेशीले कब्जा गर्ने, फिजीको मोडेलमा नक्कली नागरिकतालाई आधार बनाएर नेपाललाई त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने बनाउने जस्ता अनेक विषयहरू धेरै कोणबाट उठिरहेका छन् ।
त्यसकारण अनेक किसिमका समस्या बल्झाउँदै जाने र समाधान कहीं केही ननिस्कने गर्दा यो खेलले नै भोलि एउटा भयानक परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ भन्ने देखाइहाल्छ नि ।
० तपाईंले मुलुकको भविष्यका बारेमा जस्तो शब्दचित्र सार्वजनिक गरिदिनुभो यसले त मुटु नैै कमाउँछ । त्यत्रो क्रान्तिकारी नेताहरूले राष्ट्रलाई यति ठूलो धोका देलान् भनेर तपाईंले भन्दैमा कसरी पत्याउन सकिन्छ भन्या ?
केही मान्छेहरूको निम्ति त्यस्तो लाग्दो होला । यहाँ के स्पष्ट हुनुस् भने नेपालको इतिहास अझ भनौं विश्वकै इतिहासमा माओवादका नाममा दुईजनालाई अगाडि सारेर विदेशी शक्तिले जसरी नेपालमा युद्ध थोपर्यो यस्तो संसारमा कही पनि भएको छैन । उनीहरूलाई अगाडि सारेर यो सबै ‘मिसन’ अगाडि बढाइएको छ र त्यसको ‘कभर’मा वीरेन्द्रलाई मारिएको छ । बीचमा एउटा ठूलो राजनीतिक शून्यता पैदा गरेर नेपालको द्वन्द्व बाहिर लगेर १२ बुँदे समझदारी गरिएको छ ।
१२ बुँदे समझदारी गरिसकेपछि त हाम्रो राजनीतिको लगाम यहाँका मान्छेको हातमा छँदैछैन । सबै भारतले लगिसक्यो । त्यसपछि नेपालमा जे भैरहेको छ हामीले देखिरहेका छौं । जस्तो राष्ट्रपतिको अडान, सुशील कोइरालाको अडान, झलनाथको अडान हामीले देख्यौं नि । कसैको केही पनि लाग्दैन । व्यक्तिगत रुपमा उहाँहरूको इमान्दारीता होला म त्यो मान्दछु तर प्रक्रियाका रुपमा अथवा संस्थागत रुपमा जाने सवालमा कसैको पनि केही लाग्दैन । किनभने १२ बुँदेपछि यहाँको राजनीति कसैको पनि हातमा छैन । त्यसकारण यस्तो भयावह अवस्थामा पुर्याउने पूर्वाधार जति पनि बन्यो त्यो माओवादीले नै बनाएको हो भन्नेमा कुनंै शंका नगरे हुन्छ ।
० तपाईंले माथि जनयुद्धको कभरमा वीरेन्द्रको हत्या भयो भन्नुभयो यसलाई अरु प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
भारतीयहरूको निम्ति कतिपय मुद्दामा नेपालको राजतन्त्र समस्याको रुपमा देखियो । जस्तो कि नागरिकताको प्रश्न, सुरक्षाको प्रश्न, सुपुर्दगी सन्धि, हतियार खरीदका मामिला भए, २०४५ सालमा भारतले यिनै प्रश्नहरू उठाएर नाकाबन्दी लगायो । भारतले यी स्वार्थहरू नेपालका राजाहरू रहेसम्म पूर्ति गर्न सम्भव नभएको देखिसकेको थियो । त्यसकारणले माओवादीको एउटा खतरनाक पक्ष भनेको नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षलाई छिन्नभिन्न पार्ने काम गर्यो र त्यसको परिणाम त्यो समाजको जगमा निर्मित राज्यको शक्ति केन्द्रलाई ढालिसकेपछि स्वाभाविक रुपमा राज्यको नेतृत्व मेरुदण्डविहीन भयो, सेना नेतृत्वविहीन भयो । त्यसबेला राजतन्त्र शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहेको थियो र सेनामाथि कब्जा गर्ने उनीहरूको योजना थियो । जसले अवरोध गर्दैआएको थियो त्यो संस्थालाई किनारा लगाउने र अर्को उसले नेतृत्व गरेको मेरुदण्ड जुन हो त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने कामको पूर्वाधार माओवादीले बनाएको हो । यसको अर्को प्रमाण के हो भने उनीहरूले वीरेन्द्रको हत्या हुने बित्तिकै जोजो व्यक्तिमाथि हत्याको अरोप लगाए र प्रचार गरे उनीहरू यत्रो समयसम्म सत्तामा बसेपछि पनि त्यो हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन गर्ने प्रयास समेत गरेनन् र जसलाई आरोप लगाइएको थियो उसमाथि औंलो उठाउने प्रयास समेत गरेनन् । यो सबै घटनाहरूले माथिको प्रसंगलाई पुष्टि गर्दछ ।